2019 October 21 : AsiaNet-Pakistan
Karachi, UBL Fund Managers Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 29, 2019 at Karachi to consider and approve the financial statements for the period ended September 30, 2019. The…
Karachi, IBL Healthcare Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended Septembe…
Karachi, Pakistan Petroleum Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended Sept…
Karachi, Escorts Investment Bank Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended …
Karachi, Samin Textiles Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September…
Karachi, Atlas Insurance Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 29, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended Septemb…
Karachi, Ittefaq Iron Industries Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended …
Karachi, Pioneer Cement Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September…
Karachi, The Searle Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended Sept…
Board of directors meeting of Ghani Global Holdings Limited
Karachi, Ghani Global Holdings Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the 1st Quarterly Accounts for the period ende…
Karachi, TPL Insurance Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September…
Karachi, Saudi Pak Leasing Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on October 21, 2019 at Karachi to consider Quarterly Accounts for the period ended September 30, 20…